April 2022 - ShwengweGames
ခဈြသူနဲ့ လကျထပျလိုကျပွီဖွဈကွောငျး အသိပေးလာတဲ့ သရုပျဆောငျ မသေကျခိုငျ
April 30, 2022 by Shwengwe Games
တဈခြိနျက ဗီဒီယိုကားတှထေဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မသေကျခိုငျက အရုပျမလေးလိုခဈြစရာကောငျးပွီး အပွုံးခြိုခြိုလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့သူလေး ဖွဈပါတယျ။
မသေကျခိုငျက အနုပညာအလုပျတှေ အရငျလိုအမြားကွီးမလုပျ ဖွဈပမေယျ့ သူမကိုခဈြခငျအားပေးတဲ့ ပရိသတျတှကေ ယနထေ့ကျတိုငျ အမြားအပွား ရှိနဆေဲပါပဲ။ လကျရှိနိုငျငံခွားမှာ အခွခေနြထေိုငျနတေဲ့ မသေကျခိုငျက အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျကို ဖျောပွထားလမေ့ရှိပါဘူး။
ဒါပမေ့ယျ့ ဒီနမှေ့ာတော့ မသေကျခိုငျက သူမခဈြရတဲ့သူနဲ့ လကျထပျလိုကျပွီဖွဈကွောငျးကို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျထကျကနေ married ဆိုပွီးသူမရဲ့ ခဈြသူကို Tag တှဲပွီး ပရိသတျတှကေို အသိပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေ မငျးသမီးမသေကျခိုငျကို နှမြောနကွေပွီး ဂုဏျယူကွောငျးလညျး တခြိုတှကေပွောပွထားတာဖွဈပါတယျ။ခဈြရသူနဲ့ ထာဝရလကျတှဲသှားနိုငျပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော
တစ်ချိန်က ဗီဒီယိုကားတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မေသက်ခိုင်က အရုပ်မလေးလိုချစ်စရာကောင်းပြီး အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
မေသက်ခိုင်က အနုပညာအလုပ်တွေ အရင်လိုအများကြီးမလုပ် ဖြစ်ပေမယ့် သူမကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေက ယနေ့ထက်တိုင် အများအပြား ရှိနေဆဲပါပဲ။ လက်ရှိနိုင်ငံခြားမှာ အခြေချနေထိုင်နေတဲ့ မေသက်ခိုင်က အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကို ဖော်ပြထားလေ့မရှိပါဘူး။
ဒါပေ့မယ့် ဒီနေ့မှာတော့ မေသက်ခိုင်က သူမချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်ကနေ married ဆိုပြီးသူမရဲ့ ချစ်သူကို Tag တွဲပြီး ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေက မင်းသမီးမေသက်ခိုင်ကို နှမျောနေကြပြီး ဂုဏ်ယူကြောင်းလည်း တချိုတွေကပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရသူနဲ့ ထာဝရလက်တွဲသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်
Season2ထှကျရှိလာဦးမညျ့ “Pachinko” ဇာတျလမျးတှဲ
“Pachinko” ဇာတျလမျးဟာ Season2အနနှေငျ့ပွနျလညျထှကျရှိလာဦးမယျဆိုတဲ့ သတငျးကတော့တရားဝငျထှကျရှိလာပါပွီ။
“Pachinko” ဇာတျလမျးတှဲဟာ Season2အနနှေငျ့ပွလညျထှကျရှိလာဦးမယျဆိုအကွောငျးကို Season 1ရဲ့ နောကျဆုံးအပိုငျး မတိုငျ တှငျ Apple TV+ကနေ ဧပွီ ၂၉ ရကျမှာ တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။
“Pachinko” ဇာတျလမျးတှဲကတော့ Min Jin Lee ရဲ့နာမညျတူ အရောငျးရဆုံးစာအုပျအပျေါ အခွခေံရိုကျကူးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဇာတျကွောငျးကတော့ စဈပှဲနဲ့ငွိမျးခမျြးရေး၊ ခဈြခွငျးနဲ့ခှဲခွားမှု၊ အမရေိကနျ၊ ဂပြနျနဲ့ ကိုရီးယားတို့ရဲ့အောငျမွငျမှုနဲ့ အဆုံးအဖွတျတှအေကွောငျး ရိုကျကူးထားတာပါ။
သရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ကတော့ Lee Min Ho က Hansu အဖွဈ၊ Kim Min Ha က ဆယျကြျောသကျအရှယျ Sunja အဖွဈ၊ Youn Yuh Jung ကတော့ အသကျကွီးလာတဲ့ Sunja အဖွဈ၊ Soji Arai ကတော့ Mozasu အဖွဈ၊ Jin Ha ကတော့ Solomon အဖွဈ၊ Jung In Ji ကတော့ Yangjin အဖွဈ၊
Minami Kaho က Etsuko အဖွဈ၊ Noh Sang Hyun က Isak အဖွဈ၊ Anna Sawai က Naomi အဖွဈ၊ Han Jun Woo က Yoseb အဖွဈ၊ Jung Eun Chae က Kyunghee အဖွဈ၊ Jimmi Simpson က Tom Andrews အဖွဈနဲ့ Yeon Yoo Na ကတော့ ကလေးဘဝ Sunja အဖွဈပါဝငျထားတာဖွဈပါတယျ။
“အနိုငျမခံ အရှုံးပေးတတျတဲ့ မိသားစုရဲ့ ထူးထူးခွားခွား ဇာတျလမျးကို ဆကျပွောပွနိုငျရနျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုကို စကားလုံးတှနှေငျ့ အကယျြတဝငျ့မဖျောပွနိုငျပါဘူး။””ဒီဇာတျလမျးအတှကျကို ယုံကွညျပွီး ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Apple နှငျ့ Media Res စတူဒီယိုရှိ အံ့သွဖှယျအဖှဲ့ နှငျ့ အားပေးခဲ့ကွသောာ ပရိသတျမြားကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ဒီလို အံ့သွဖှယျကောငျးတဲ့ သရုပျဆောငျတှနေဲ့ အဖှဲ့သားတှနေဲ့ ဆကျပွီး လကျတှဲနိုငျခဲ့တာ ဂုဏျယူမိပါတယျ။”လို့ Pinchinko ဇာတျလမျးအား ဖနျတီး ထုတျလုပျသူ Soo Hugh က ပွောပါတယျ။
“Pachinko” ရဲ့ Season2အတှကျ စိတျလှုပျရှားနကွေပွီလား ပရိသတျကွီးရေ.။ Season 1 ကွညျ့ပွီး ဇာတျလမျးရဲ့ အခွနေကေိုလညျး မှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါဦးနျော
“Pachinko” ဇာတ်လမ်းဟာ Season2အနေနှင့်ပြန်လည်ထွက်ရှိလာဦးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့တရားဝင်ထွက်ရှိလာပါပြီ။
“Pachinko” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Season2အနေနှင့်ပြလည်ထွက်ရှိလာဦးမယ်ဆိုအကြောင်းကို Season 1ရဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်း မတိုင် တွင် Apple TV+ကနေ ဧပြီ ၂၉ ရက်မှာ တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
“Pachinko” ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ Min Jin Lee ရဲ့နာမည်တူ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အပေါ် အခြေခံရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကြောင်းကတော့ စစ်ပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ချစ်ခြင်းနဲ့ခွဲခြားမှု၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။
သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Lee Min Ho က Hansu အဖြစ်၊ Kim Min Ha က ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Sunja အဖြစ်၊ Youn Yuh Jung ကတော့ အသက်ကြီးလာတဲ့ Sunja အဖြစ်၊ Soji Arai ကတော့ Mozasu အဖြစ်၊ Jin Ha ကတော့ Solomon အဖြစ်၊ Jung In Ji ကတော့ Yangjin အဖြစ်၊
Minami Kaho က Etsuko အဖြစ်၊ Noh Sang Hyun က Isak အဖြစ်၊ Anna Sawai က Naomi အဖြစ်၊ Han Jun Woo က Yoseb အဖြစ်၊ Jung Eun Chae က Kyunghee အဖြစ်၊ Jimmi Simpson က Tom Andrews အဖြစ်နဲ့ Yeon Yoo Na ကတော့ ကလေးဘဝ Sunja အဖြစ်ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
“အနိုင်မခံ အရှုံးပေးတတ်တဲ့ မိသားစုရဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ပြောပြနိုင်ရန် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို စကားလုံးတွေနှင့် အကျယ်တဝင့်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။””ဒီဇာတ်လမ်းအတွက်ကို ယုံကြည်ပြီး ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Apple နှင့် Media Res စတူဒီယိုရှိ အံ့သြဖွယ်အဖွဲ့ နှင့် အားပေးခဲ့ကြသောာ ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလို အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ဆက်ပြီး လက်တွဲနိုင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။”လို့ Pinchinko ဇာတ်လမ်းအား ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူ Soo Hugh က ပြောပါတယ်။
“Pachinko” ရဲ့ Season2အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီလား ပရိသတ်ကြီးရေ.။ Season 1 ကြည့်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ အခြေနေကိုလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်
လှပတဲ့ ကမျးခွထေကျမှာ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး လေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိ လှနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုံရှရေညျ
ပရိသတျကွီးရေ ဝတျမှုံရှရေညျကတော့အကယျဒမီဆုနှဈဆုပိုငျရှငျမငျးသမီးတဈလကျပါ။ သူမရဲ့ဇာတျကားတှဟော တဈနှဈထကျတဈနှဈပိုပိုလကျရာမွောကျကာ ထိပျတနျးစာရငျးဝငျမငျးသမီးတဈလကျလို့တောငျဆိုရမှာပါ။
ဖဖေျောဝါရီလကစတငျပွီးအနုပညာအလုပျတှရေပျနားခဲ့တဲ့မငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ မကွာသေးခငျကစတငျကာ ပရိသတျရှကေို့ သူမရဲ့နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ပွနျလညျထိတှခေဲ့တာပါ။
သူမအနနေဲ့ တခြို့သောပရိသတျတှရေဲ့ရိုကျခတျပွောဆိုမှုတှကေို ခံရပမေယျ့လညျးအပွုံးမပကျြဘဲ သူမရဲ့ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို သူမကိုခဈြခငျအားပေးတဲ့ခဈြပရိသတျတှအေတှကျအမွဲတငျပေးလကျြရှိတာပါ။
ယခုတခါမှာလညျး ကမျးခွဝေတျစုံလေးနှငျ့ မွငျရသူတိုငျးစှဲမကျသှားစလေောကျ‌‌အောငျ အလှတရားတှပေျေါလှငျနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို အငျစတာဂရမျမှာတငျထားတာပါတယျ
အခြိနျအတျောကွာ ပြောကျကှယျနတေဲ့သူမရဲ့လှုပျရှားမှုတှကေို မြှျောလငျ့စောငျ့စားနတေဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ သူမရဲ့အလှပုံလေးတှကေိုတငျထားတာပါ။
Photo – Wutt Hmone Shwe Yi’s Instagram
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့အကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုပိုင်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ သူမရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပိုလက်ရာမြောက်ကာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်မင်းသမီးတစ်လက်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားခဲ့တဲ့မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ မကြာသေးခင်ကစတင်ကာ ပရိသတ်ရှေ့ကို သူမရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့ခဲ့တာပါ။
သူမအနေနဲ့ တချို့သောပရိသတ်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေကို ခံရပေမယ့်လည်းအပြုံးမပျက်ဘဲ သူမရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို သူမကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲတင်ပေးလျက်ရှိတာပါ။
ယခုတခါမှာလည်း ကမ်းခြေဝတ်စုံလေးနှင့် မြင်ရသူတိုင်းစွဲမက်သွားစေလောက်‌‌အောင် အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အင်စတာဂရမ်မှာတင်ထားတာပါတယ်
အချိန်အတော်ကြာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့အလှပုံလေးတွေကိုတင်ထားတာပါ။
photo Wutt Hmone Shwe Yi’s Instagram
Johnny Depp နဲ့ကှာရှငျးခဲ့ပွီးနောကျ ‘ Elon Musk နဲ့တှဲခဲ့တဲ့ မငျးသမီး Amber Heard
Amber Heard ရဲ့အေးဂငျြ့ပွောကွားခကျြအရတော့ သူ(မ)ဟာ Depp နဲ့ကှာရှငျးခဲ့ပွီးနောကျ ‘စိတျဟာပေါကျကို ဖွညျ့ဆညျးတဲ့အနနေဲ့သာ’ Elon Musk နဲ့တှဲခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
မကွာသေးခငျမှာတော့ မငျးသမီး Amber Heard ရဲ့အေးဂငျြ့ဟောငျးဖွဈသူက မငျးသမီးဖွဈသူဟာ Johnny Depp နဲ့ကှာရှငျးခဲ့ပွီးနောကျ “ကှကျလပျတဈခုကို ဖွညျ့စှကျတဲ့အနနေဲ့” Elon Musk ကိုတှဲခဲ့ခွငျးဖွဈတယျလို့ သကျသထှေကျဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒီသကျသထှေကျဆိုခကျြကို ပွုလုပျခဲ့သူကတော့ Depp နဲ့ Heard တို့နှဈဦးစလုံးကို ကိုယျစားပွုပေးနတေဲ့ အနုပညာအေးဂငျြ့ဖွဈသူ Christian Carino ပါ။
မငျးသမီးဖွဈသူက Billionaire Elon Musk နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ လမျးခှဲခဲ့ပွီးနောကျ ဝမျးနညျးနခေဲ့တာကို Carino အနနေဲ့ “တကယျခဈြစိတျမြိုးမရှိခဲ့ရငျ ဘာလို့ဝမျးနညျးနသေေးတာလဲ။” လို့မေးခှနျးထုတျခဲ့ကွောငျး ပွနျလညျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူနဲ့မငျးသမီးဖွဈသူတို့အကွား စာပို့ပွောဆိုမှုတှမှော မငျးသမီးဖွဈသူက Elon Musk ကို စိတျဟာပေါကျ ဖွညျ့ဆညျးလို့တဲ့သဘောနဲ့သာ တှဲခဲ့ကွောငျးပွောဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။
နောကျစာပါအကွောငျးအရာမှာတော့ မငျးသမီးဖွဈသူက သူ(မ)ဒီလိုလမျးခှဲမှုတှေ ကွုံတှရေ့တိုငျး သတငျးမီဒီယာတှကေ ရေးသားမှုတှကေို သဘောမကကြွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပွီး ဒီအကွောငျးအရာအပျေါမှာလညျး Carino က “နငျသာ တကယျ့ဒိတျဒိတျကွဲလူတှနေဲ့ မတှဲရငျ ဒီလိုဖွဈလာတာမြိုးကို ရှောငျရှားလို့ရမှာပေါ့။
နငျက နာမညျမကွီးတဲ့လူတှနေဲ့ တှဲလညျးရတာပဲလေ။” လို့ပွနျလညျရေးသားခဲ့ပွီး ဒီစာအပျေါ မေးမွနျးမှုအပျေါမှာလညျး “ကိုယျ့ကိုယျရေးကိုယျတာအကွောငျးတှကေို သတငျးအဖွဈရေးသားတာ မမွငျခငျြရငျ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့သူတှနေဲ့ မတှဲဖို့ပဲရှိတာပေါ့။” လို့ အေးဂငျြ့ဟောငျးဖွဈသူက ထှကျဆိုဖွကွေားခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ထှကျဆိုခကျြမှာ မငျးသမီးဖွဈသူက ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ မငျးသားကွီး Johnny Depp ကိုလှမျးမိကွောငျးပွောဆိုခဲ့ပွီး သူ(မ)ရဲ့ပွောဆိုမှုတှဟော သူတို့နှဈဦးအကွား ပွနျလညျသငျ့မွနျအောငျ ကွိုးစားကွညျ့ခငျြတဲ့ သဘောထားမြိုးရှိနပေုံပျေါတယျဆိုတဲ့အခကျြလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ မငျးသမီးဖွဈသူကို Johnny Depp က အသရဖေကျြမှုနဲ့ တရားစှဲဆိုထားလို့ အမှုတှဲရငျဆိုငျနရေတာဖွဈပါတယျ။
Amber Heard ရဲ့အေးဂျင့်ပြောကြားချက်အရတော့ သူ(မ)ဟာ Depp နဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးနောက် ‘စိတ်ဟာပေါက်ကို ဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့သာ’ Elon Musk နဲ့တွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မကြာသေးခင်မှာတော့ မင်းသမီး Amber Heard ရဲ့အေးဂျင့်ဟောင်းဖြစ်သူက မင်းသမီးဖြစ်သူဟာ Johnny Depp နဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးနောက် “ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်စွက်တဲ့အနေနဲ့” Elon Musk ကိုတွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သက်သေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီသက်သေထွက်ဆိုချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သူကတော့ Depp နဲ့ Heard တို့နှစ်ဦးစလုံးကို ကိုယ်စားပြုပေးနေတဲ့ အနုပညာအေးဂျင့်ဖြစ်သူ Christian Carino ပါ။
မင်းသမီးဖြစ်သူက Billionaire Elon Musk နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက် ဝမ်းနည်းနေခဲ့တာကို Carino အနေနဲ့ “တကယ်ချစ်စိတ်မျိုးမရှိခဲ့ရင် ဘာလို့ဝမ်းနည်းနေသေးတာလဲ။” လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒ
ဒါ့အပြင် သူနဲ့မင်းသမီးဖြစ်သူတို့အကြား စာပို့ပြောဆိုမှုတွေမှာ မင်းသမီးဖြစ်သူက Elon Musk ကို စိတ်ဟာပေါက် ဖြည့်ဆည်းလို့တဲ့သဘောနဲ့သာ တွဲခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်စာပါအကြောင်းအရာမှာတော့ မင်းသမီးဖြစ်သူက သူ(မ)ဒီလိုလမ်းခွဲမှုတွေ ကြုံတွေ့ရတိုင်း သတင်းမီဒီယာတွေက ရေးသားမှုတွေကို သဘောမကျကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဒီအကြောင်းအရာအပေါ်မှာလည်း Carino က “နင်သာ တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲလူတွေနဲ့ မတွဲရင် ဒီလိုဖြစ်လာတာမျိုးကို ရှောင်ရှားလို့ရမှာပေါ့။
နင်က နာမည်မကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ တွဲလည်းရတာပဲလေ။” လို့ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပြီး ဒီစာအပေါ် မေးမြန်းမှုအပေါ်မှာလည်း “ကိုယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းတွေကို သတင်းအဖြစ်ရေးသားတာ မမြင်ချင်ရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေနဲ့ မတွဲဖို့ပဲရှိတာပေါ့။” လို့ အေးဂျင့်ဟောင်းဖြစ်သူက ထွက်ဆိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်မှာ မင်းသမီးဖြစ်သူက ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ မင်းသားကြီး Johnny Depp ကိုလွမ်းမိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး သူ(မ)ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာ သူတို့နှစ်ဦးအကြား ပြန်လည်သင့်မြန်အောင် ကြိုးစားကြည့်ချင်တဲ့ သဘောထားမျိုးရှိနေပုံပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ မင်းသမီးဖြစ်သူကို Johnny Depp က အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားလို့ အမှုတွဲရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
မဟာမုနိမကျြရှငျတျောကွီးမှာ ဝယြောဝစ်စ ကုသိုလျပွုခဲ့တဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝလောတဲ့ သရုပျဆောငျ ပုလဲဝငျး
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလှလှလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးခြော ပုလဲဝငျးကတော့ နာမညျနဲ့လိုကျဖကျအောငျ လှပ လှနျးသူတဈယောကျပါ။
ပုလဲဝငျးဟာ ကွျောငွာတှနေဲ့ ဗီစီဒီတှေ မြားစှာပါဝငျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို မ လုပျကိုငျတော့ပဲ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေိုသာ အခွခေလြုပျကိုငျ နတောပဲဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာ ခရီးတှထှေကျဖွဈနတေဲ့ ပုလဲဝငျးဟာ ဒီကနမှေ့ာ လညျး ပွငျဦးလှငျမွိုကိုရောကျရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ပုလဲဝငျးက ပွငျဦးလှငျကိုရောကျတုနျးရောကျခိုကျ “၁၃၈၄ တနျခူးလကှယျနေ့ မနကျ အရုဏျ မဟာမုနိမကျြရှငျတျောကွီး မကျြနှာသဈ ရောငျတျောဖှငျ့မင်ျဂလာတှငျ ဝရောဝစ်စကုသိုလျယူ၊ နံ့သာရညျ သနပျခါးသှေးကုသိုလျယူ၊
ကွေးဖလား ရတေျောကရား ဆှမျးပနျ ကနျ ပွောငျလကျတောကျပအောငျ တိုကျခြှတျဆေးကုသိုလျ ပနျးစတေီ ပနျးအိုးထိုးရာတှငျ ဟိုနညျးနညျး ဒီနညျးနညျး ဝငျကူ ကုသိုလျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ကုသိုလျလေးကို မြှဝပေေးလာပါတယျ။
ပုလဲဝငျးကတော့ သူမယူဖွဈခဲ့တဲ့ ကုသိုလျလေးကို ပရိသတျတှေ ထပျတူသာဓုချေါဆိုနိုငျဖို မြှဝပေေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ပုလဲဝငျးရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုကွညျ့ပွီးကွညျနူးမှုတှကေူးစကျသှားမယျထငျပါတယျနျော။
Source: Pearl Winn’s fb
Credit; Myanmar Celebrities Times
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလှလှလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချော ပုလဲဝင်းကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် လှပ လွန်းသူတစ်ယောက်ပါ။
ပုလဲဝင်းဟာ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဗီစီဒီတွေ များစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မ လုပ်ကိုင်တော့ပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာ အခြေချလုပ်ကိုင် နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ ခရီးတွေထွက်ဖြစ်နေတဲ့ ပုလဲဝင်းဟာ ဒီကနေ့မှာ လည်း ပြင်ဦးလွင်မြိုကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုလဲဝင်းက ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် “၁၃၈၄ တန်ခူးလကွယ်နေ့ မနက် အရုဏ် မဟာမုနိမျက်ရှင်တော်ကြီး မျက်နှာသစ် ရောင်တော်ဖွင့်မင်္ဂလာတွင် ဝေရာဝစ္စကုသိုလ်ယူ၊ နံ့သာရည် သနပ်ခါးသွေးကုသိုလ်ယူ၊
ကြေးဖလား ရေတော်ကရား ဆွမ်းပန် ကန် ပြောင်လက်တောက်ပအောင် တိုက်ချွတ်ဆေးကုသိုလ် ပန်းစေတီ ပန်းအိုးထိုးရာတွင် ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း ဝင်ကူ ကုသိုလ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ကုသိုလ်လေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
ပုလဲဝင်းကတော့ သူမယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်လေးကို ပရိသတ်တွေ ထပ်တူသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို မျှဝေပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပုလဲဝင်းရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးမှုတွေကူးစက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ခဈြညီမလေးအား အောငျမွငျမှုသရဖူ ဆောငျးနိုငျစရေနျ အဈမကွီးပီသစှာ ပွုစုပြိုးထောငျပေးနိုငျတာကွောငျ့ ပရိသတျမြားရဲ့ ခြီးကြူးမှုကိုရနတေဲ့ ဘီလီလမငျးအေး
အဆိုတျောမလေး ဘီလီလမငျးအေးဟာ ဂီတနယျပယျမှာ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့လြှောကျလှမျးလာခဲ့ပွီး နရောတဈနရောကို ရပျတညျထားနိုငျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ Myanmar Idol အဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဝငျရောကျယှဥျပွိုငျရငျး ပရိသတျအားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးလညျး အဆိုကောငျမှနျသလို ဘီလီဟာ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘီလီလမငျးအေးမှာလညျး သူမလို့ အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့ ညီမလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထား ပါတယျ။ ညီမလေးကိုလညျး အဈမကွီးတဈယောကျပီသ ဘီလီဟာ လိုလသေေးမရှိအောငျ အမွဲဂရုစိုကျပေးတာ ကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ ဘီလီရဲ့ အမကွီးပီသလှတဲ့ စိတျဓာတျကို လေးစားနခေဲ့ကွပါသေးတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ဘီလီလမငျးအေးက ပရိသတျတှအေတှကျ ကွညျနူးစရာလေးကို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာလညျး ဘီလီကဘှဲ့ရသှားတဲ့ ညီမလေးရဲ့ အောငျမွငျမှုကို ကွညျ့ပွီးပီတိတှဖွေဈနခေဲ့ကာ “Congratulations ညီမလေးရေ ကြေးဇူးတျောကွောငျ့ ညီမလေးအတှကျအမွဲတမျးလိုအပျမှုတှတေိုငျး ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျဝမျးသာရသလို ညီမလေးရဲ့အောငျမွငျမှုတှကေိုမွငျရတိုငျး အမတဈယောကျအနနေဲ့ ဘေးကနေ ပီတိတှနေဲ့ပေါ့ညီမလေးရေ ညီမလေးအတှကျမိသားစုအတှကျ ဆကျကွိုးစားဦးမယျနျော အရမျးခဈြတယျနျော။Love You
Not everyone will understand your journey. That’s fine, it’s not their journey to make sense of It’s yours. So follow your passion. It will lead you to your purpose……” ဆိုပွီး ညီမလေးနဲ့အတူ ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို မြှဝဖေျောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ ဘီလီလမငျးအေးရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ဘီလီရဲ့ ညီမလေးထူးခြှနျးမှုကို ဂုဏျပွုနကွေသလို အမဖွဈသူရဲ့ အမပီသမှုကိုလညျး ခြီးကြူးနခေဲ့ကွပါသေးတယျ။ အောငျမွငျမှု သရဖူဆောငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ဘီလီလမငျးအေးရဲ့ ညီမလေးကို ဂုဏျပွုပေးလိုကျပါဦးနျော.
Source – Billy La Min Aye fb page ‘
အဆိုတော်မလေး ဘီလီလမင်းအေးဟာ ဂီတနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ပြီး နေရာတစ်နေရာကို ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ Myanmar Idol အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းလည်း အဆိုကောင်မွန်သလို ဘီလီဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီလီလမင်းအေးမှာလည်း သူမလို့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထား ပါတယ်။ ညီမလေးကိုလည်း အစ်မကြီးတစ်ယောက်ပီသ ဘီလီဟာ လိုလေသေးမရှိအောင် အမြဲဂရုစိုက်ပေးတာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေက ဘီလီရဲ့ အမကြီးပီသလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဘီလီလမင်းအေးက ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည်နူးစရာလေးကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း ဘီလီကဘွဲ့ရသွားတဲ့ ညီမလေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကြည့်ပြီးပီတိတွေဖြစ်နေခဲ့ကာ “Congratulations ညီမလေးရေ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ညီမလေးအတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်မှုတွေတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာရသလို ညီမလေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်ရတိုင်း အမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘေးကနေ ပီတိတွေနဲ့ပေါ့ညီမလေးရေ ညီမလေးအတွက်မိသားစုအတွက် ဆက်ကြိုးစားဦးမယ်နော် အရမ်းချစ်တယ်နော်။Love You
Not everyone will understand your journey. That’s fine, it’s not their journey to make sense of It’s yours. So follow your passion. It will lead you to your purpose……” ဆိုပြီး ညီမလေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘီလီလမင်းအေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဘီလီရဲ့ ညီမလေးထူးချွန်းမှုကို ဂုဏ်ပြုနေကြသလို အမဖြစ်သူရဲ့ အမပီသမှုကိုလည်း ချီးကျူးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေးရဲ့ ညီမလေးကို ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ပါဦးနော်.
မကွာခငျမှာ တူမလေး ရတော့မှာမို့ ပြျောရှငျမဆုံး ဖွဈနတေဲ့ သံစဉျမောငျ
သံစဉျမောငျက ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အပွုံးလေးတှအေပွငျ တမူထူးခွားတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူပဲ ဖွဈပါတယျ။သရုပျဆောငျ ဘဘေီမောငျရဲ့ အခဈြဆုံး ညီမလေးတဈဦး ဖွဈတဲ့ သံစဉျမောငျက မျောလျဒယျတဈယောကျအနနေဲ့ စတငျရပျတညျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ သရုပျဆောငျနယျပယျထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အဈမ ဖွဈသူရဲ့ ပံ့ပိုး လမျးညှနျမှု အောကျမှာ လိမ်မာစှာ စကား နားထောငျနထေိုငျပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျ ကွိုးစား လုပျဆောငျနကော ယခုအခြိနျမှာတော့ သူမက ပရိသတျတှရေငျထဲမှာ နရောတဈနရောကို ရပျတညျထားနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
သံစဉျမောငျ ကတော့ အုပညာ လှုပျရှားမှု အနနှေငျ့ Photo Shooting မြားကို ပွနျလညျလုပျကိုငျလကျြရှိပွီး online Live Sale ကိုလညျး တဈဖကျတဈလမျးမှ လုပျကိုငျလကျြရှိနပေါတယျ။ဒါအပွငျ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုတိုငျးကိုလညျး ပရိသတျကွီးထံ အမွဲ တငျပေးနသေူလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ အဈမဖွဈသူ ဘဘေီမောငျ မှ မကွာမီမှာမှေးလာတော့မညျ့ သူမရဲ့ တူမလေး ရတော့မှာမို့ပြျောရှငျနတေဲ့အကွောငျးကို “မကွာခငျတူမလေးရတော့မယျ 🥰”ဆိုပွီးအဈဖွဈသူနှငျ့ အတူ ရိုကျထားတဲ့ ပုံရိပျမြားကိုတငျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဘဘေီမောငျနှငျ့ မကွာမီမှာ အဒျေါတဈယာကျဖွဈလာတော့မယျ့ သံစဉျမောငျရဲ့ ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံရိပျမြားက ခဈြစရာကောငျးလို့ ပွနျလညျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
Source Than Sin Maung
သံစဉ်မောင်က ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေအပြင် တမူထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်ရဲ့ အချစ်ဆုံး ညီမလေးတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ သံစဉ်မောင်က မော်လ်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်မ ဖြစ်သူရဲ့ ပံ့ပိုး လမ်းညွှန်မှု အောက်မှာ လိမ္မာစွာ စကား နားထောင်နေထိုင်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေကာ ယခုအချိန်မှာတော့ သူမက ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာကို ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သံစဉ်မောင် ကတော့ အုပညာ လှုပ်ရှားမှု အနေနှင့် Photo Shooting များကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး online Live Sale ကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင် သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးထံ အမြဲ တင်ပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ အစ်မဖြစ်သူ ဘေဘီမောင် မှ မကြာမီမှာမွေးလာတော့မည့် သူမရဲ့ တူမေလေး ရတော့မှာမို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အကြောင်းကို “မကြာခင်တူမလေးရတော့မယ် 🥰”ဆိုပြီးအစ်ဖြစ်သူနှင့် အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်များကိုတင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘေဘီမောင်နှင့် မကြာမီမှာ အဒေါ်တစ်ယာက်ဖြစ်လာတော့မယ့် သံစဉ်မောင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်များက ချစ်စရာကောင်းလို့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ လူငယျဆနျဆနျ နုပြိုလှပနတေဲ့ ခငျလေးနှယျ
April 29, 2022 by Shwengwe Games
ပရိသတျကွီးရေ လှပပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ခငျလေးနှယျကိုတော့ သိကွမယျလို့ ထငျပါတယျနျော။တိုငျးရငျးသူမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီး သူမရဲ့အသံဝဲဝဲလေးနဲ့စကားပွော ပုံလေးတှကေ ပရိသတျတှကေို အဓိကကွှစေခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှေ ရပျနားထားပမေယျ့လညျး ပရိသတျတှကေတော့ ခုခြိနျထိ သူမကိုခဈြခငျအားပေးနတောဘဲ ဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုတှနေဲ့အတူခရီးသှား ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ အမွဲ မြှဝပေေး‌လရှေိ့ပါတယျနျော။
အခုလတျရှိမှာလညျး ပနျးရောငျဝတျစုံလေးနဲ့ ကလေးတယောကျလို နုပြိုလှပနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို ခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလာတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။ပုံတိုငျးကလညျး လူငယျဆနျဆနျခဈြစရာကောငျးလှနျးမို့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
ဖတျရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ဘေးအန်တရာယျ အပေါငျးမှ ကငျးဝေးပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Photo – Khin Lay Nwe
Thwin – Shwengwegames
ပရိသတ်ကြီးရေ လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခင်လေးနွယ်ကိုတော့ သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။တိုင်းရင်းသူမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အသံဝဲဝဲလေးနဲ့စကားပြော ပုံလေးတွေက ပရိသတ်တွေကို အဓိကကြွေစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေကတော့ ခုချိန်ထိ သူမကိုချစ်ခင်အားပေးနေတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူခရီးသွား ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိ သတ်တွေအတွက် အမြဲ မျှဝေပေး‌လေ့ရှိပါတယ်နော်။
အခုလတ်ရှိမှာလည်း ပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကလေးတယောက်လို နုပျိုလှပနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလာတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပုံတိုင်းကလည်း လူငယ်ဆန်ဆန်ချစ်စရာကောင်းလွန်းမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မိတျကပျ၊ ဆံထုံး လကျမှုအနုပညာရပျတှနှေငျ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုခငျြသူမြားအတှကျ သတငျးကောငျးလေးကို မြှဝလောတဲ့ ညီညီမောငျ (စမျးခြောငျး)
ပရိသတျတှကေ သုသုလို့ ခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ မိတျကပျပညာရှငျ ညီညီမောငျ (စမျးခြောငျး)ကတော့ အောငျမွငျတဲ့ မိတျကပျပညာရှငျ ပရိသတျအခဈြတျော တဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။
သုသုကတော့ မိတျကပျပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ ဆယျစုနှဈ နှဈခုကွာရပျတညျနတေဲ့သူဖွဈပွီး အရညျခငျြးပွညျ့ဝတဲ့ တပညျ့တှကေိုလညျး မှေးထုတျထားခဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာလညျး သုသုကတော့ သူတတျမွောကျကာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုရပျတညျနတေဲ့ လကျမှုအနုပညာရပျတှကေို သူ့လိုပဲ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုခငျြသူတှအေတှကျ မိတျကပျနဲ့ ဆံထုံးသငျတနျးလေးဖှငျ့လှဈသှားဖို့ ရှိကွောငျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။
ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေိုပညာယူကာ သုသုကိုယျတိုငျကိုယျကြ သငျကွားပေးမှာဖွဈပွီးအသားအရောငျလိုကျ အောကျခံမိတျကပျ လိမျးနညျးမြိုးစုံ၊ လူတဈယောကျ ရဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှု မကျြနှာအနအေထားလိုကျ ဖကျသော ဆံပငျ၊ဆံထုံး ပွငျဆငျပေး ခွငျး နညျးမြိုးစုံ၊ သတို့သား+သတို့သမီး ၊ဘှဲ၊ပှဲတကျ ဝတျစားဆငျယငျမှုနဲ့ ပတျသတျသော မိတျကပျ ဆံပငျ ဆငျယငျ ထုံး ဖှဲ မှုမြားကို အသေးစိတျ သငျကွားပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျး သိရှိရပါတယျ။
သငျတနျးကာလ တဈလခှဲကွာမွငျ့မှာဖွဈပွီးတော့ ဦးဆုံးအပျနှံတဲ့ သူတှကေိုလညျး အမြိုးသမီး ဆံညှပျအခွခေံသငျတနျးကိုပါ ထညျ့သှငျးသငျကွားပေးဦးမှာပါတဲ့။
ပရိသတျကွီးတှထေဲက လကျမှုအနုပညာဖွငျ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုလိုသူမြားအတှကျ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အခှငျ့အရေးဖွဈတာကွောငျ့ ပွနျလညျမြှဝဖေျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပရိသတ်တွေက သုသုလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
သုသုကတော့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကြာရပ်တည်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး အရည်ချင်းပြည့်ဝတဲ့ တပည့်တွေကိုလည်း မွေးထုတ်ထားခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း သုသုကတော့ သူတတ်မြောက်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရပ်တည်နေတဲ့ လက်မှုအနုပညာရပ်တွေကို သူ့လိုပဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်သူတွေအတွက် မိတ်ကပ်နဲ့ ဆံထုံးသင်တန်းလေးဖွင့်လှစ်သွားဖို့ ရှိကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုပညာယူကာ သုသုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးအသားအရောင်လိုက် အောက်ခံမိတ်ကပ် လိမ်းနည်းမျိုးစုံ၊ လူတစ်ယောက် ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု မျက်နှာအနေအထားလိုက် ဖက်သော ဆံပင်၊ဆံထုံး ပြင်ဆင်ပေး ခြင်း နည်းမျိုးစုံ၊ သတို့သား+သတို့သမီး ၊ဘွဲ၊ပွဲတက် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်သော မိတ်ကပ် ဆံပင် ဆင်ယင် ထုံး ဖွဲ မှုများကို အသေးစိတ် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
သင်တန်းကာလ တစ်လခွဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဦးဆုံးအပ်နှံတဲ့ သူတွေကိုလည်း အမျိုးသမီး ဆံညှပ်အခြေခံသင်တန်းကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဦးမှာပါတဲ့။
ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက လက်မှုအနုပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသူများအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။